8Al + 30HNO3 → 15H2O + 3N2O + 8Al (MAYA3)3
aluminium nitric acid biyaha amooniyam
8 30 15 3 8 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 8Al + 30HNO3 H 15H2O + 3N2O + 8Al (MAYA3)3
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo N2O () iyo Al (NO3) 3 (aluminium nitrate)?
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 8Al + 30HNO3 H 15H2O + 3N2O + 8Al (MAYA3)3
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee N2O (nitric acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh N2O () badeecad ahaan?
52Al + 192HNO3 → 96H2O + 9N2 + 6MAYA + 6N2O + 52Al (MAYA3)3
aluminium nitric acid biyaha nitrogen nitrogen monoxide amooniyam
(rnn) (dd) (kh) (kh) (kh)
52 192 96 9 6 6 52 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 52Al + 192HNO3 H 96H2O + 9N2 + 6MAYA + 6N2O + 52Al (MAYA3)3
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo N2 (nitrojiin) iyo NO (nitrogen monoxide) iyo N2O () iyo Al (NO3) 3 (aluminium nitrate)?
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 52Al + 192HNO3 H 96H2O + 9N2 + 6MAYA + 6N2O + 52Al (MAYA3)3
3AgNO3 + Al → 3 Ag + Al (MAYA3)3
amooniyam qalin aluminium lacag amooniyam
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3AgNO3 + Al → 3Ag + Al (MAYA3)3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee AgNO3 (Nitrate Silver) oo ka falcelisa Al (aluminium)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Ag (silver) iyo Al (NO3) 3 (aluminium nitrate)?
Dhacdada ka dib AgNO3 (Nitrate Silver) waxay la falgashaa Al (aluminium)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Al (aluminium), la waayay
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3AgNO3 + Al → 3Ag + Al (MAYA3)3
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Ag (aluminium)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ag (silver) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Al(NO3)3 (aluminium)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al (NO3) 3 (aluminium nitrate) alaab ahaan?
2Al + 3Pb (MAYA3)2 → 2Al (MAYA3)3 + 3Pb
aluminium rasaasta (ii) amooniyam amooniyam horseedi
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2Al + 3Pb (MAYA3)2 → 2Al (MAYA3)3 + 3Pb
Waa maxay xaaladda falcelinta Al (aluminium) ee ka falcelisa Pb(NO3)2 (lead(ii) nitrate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Al (NO3) 3 (aluminium nitrate) iyo Pb (lead)?
Dhacdada Al (aluminium) ka dib waxay la falgashaa Pb(NO3)2 (lead(ii) nitrate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2Al + 3Pb (MAYA3)2 → 2Al (MAYA3)3 + 3Pb
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Pb (lead(ii) nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikada ee leh Pb (lead) alaab ahaan?